राजावादीको देशव्यापी प्रदर्शन : राजनीतिक परिवर्तनको वितृष्णा कि राजावादीको तागत ? | शुभयुग
राजावादीको देशव्यापी प्रदर्शन : राजनीतिक परिवर्तनको वितृष्णा कि राजावादीको तागत ?
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर १८, बिहिबार (१ साल अघि)
७२४ पाठक संख्या
१८ मंसिर,काठमाडौं – पछिल्लो केही समयदेखि देशका विभिन्न शहरमा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन शुरु भएको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा अन्तरिमसंविधानबाटै राजसंस्था फालिएको थियो । त्यस्तै ०७२ सालमा बनेको संविधानमा पनि सो व्यवस्था राखेरै गणतन्त्रनेपाल घोषणा गरिएको छ । तर, अहिले देशका अधिकांश शहरमा राजतन्त्रको पक्षमा व्यापक प्रदर्शन नै हुन थालेका छन् । राष्ट्रियझण्डा बोकेर ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्दै प्रदर्शन हुन थालेका हुन् । सबैभन्दा ठूलो जुलुस भने गत केहीदिन पहिले रुपन्देहीको बुटवल र त्यसपछि बाँकेको नेपालगञ्जबाट निस्किएको थियो ।
त्यसपछि त्यसले विस्तारै पोखरा, काठमाण्डौमा पनि निरन्तरता पाईरहेको छ । पछिल्लो दुई साताभित्र सर्लाही, हेटौंडा, जनकपुरधाम, बुटवल, पोखरा, चितवन, धनगढी हुँदै सोमबार काठमाण्डौमा र्‍याली निकालेका छन् । कहीँ मोटरसाइकल र्‍याली त कहीँ प्रदर्शन मात्र भएका हुन् । खासगरी यस्ता प्रदर्शनको नेतृत्व राजावादी विभिन्न सङ्घसंस्थाले गरिरहेका छन् । खुलेर कुनै एक संस्थाले नेतृत्व नगरे पनि सङ्घसंस्था मिलेर निरन्तर प्रदर्शनहरू भईरहेका छन् । यसमा राजसंस्थालाई मान्दै आएका राजनीतिकदलका कार्यकर्ताहरुसमेत पनि सामेल हुन थालेका छन् । उनीहरूले राजसंस्थालाई फर्काउनुपर्ने मुख्य माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । साथै हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाईरहेका छन् ।
राजसंस्थाको पक्षमा प्रदर्शन हुन थालेपछि अहिले यो विषय राजनीतिक रूपमा फेरि चर्चाको विषय हुन थालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले आमजनता र युवा पिँढीको राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रप्रतिको चाहना तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल र नेपाली बचाउन राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको माग गर्ने जनताको आवाज सकारात्मक र सराहनीय रहेको अध्यक्ष राणाको भनाई छ । ‘सम्वर्द्धनवादमा अभ्यस्त, जनता माझको राजनीतिक दल भएबाट राप्रपाले यही जनभावनाको समर्थन र पैरवी गर्दै आएको हो । राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर, राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रप्रतिको जनलहरलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु हामी सबैको कर्तव्य बनेको छ,’ राणाले आइतबार एक सन्देश जारी गर्दै भनेका थिए । २ शय ४० वर्षे राजसंस्था फालेर गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका राजनीतिकदलहरूले भने यो विषयलाई सीँधै नकारिरहेका छन् ।
राजावादीहरुले व्यापक रुपमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले भने यस्ता प्रदर्शन र र्‍यालीमा सहभागी नहुन अपिल गरेको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जनताबाट विस्थापित शक्तिहरूले पुनःस्थापित नसोच्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिगामीशक्तिले नेपालमा पुनः सफलताप्राप्त गर्न नसोंचे हुने उनको तर्क छ । ‘प्रतिगामीशक्तिले नेपाल सफलताप्राप्त गर्ने नसोंचे हुन्छ । निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिकअभ्यासको क्रममा केही कमीकमजोरी भएको हुनसक्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक समीक्षा गरेर अघि बढ्छौँ ।’ नेपालीकांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले पनि तत्काल राजसंस्था फर्किएर नआउने स्पष्ट पारे । सरकारका कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँदै प्रदर्शन भने सबैले गर्न पाउने उनले बताए ।
‘अहिले राजाको पक्षमा, राजतन्त्र ल्याउनुपर्‍यो, २०४७ को संविधान पुनःस्थापना गर्नुपर्‍यो, हिन्दूराज्य बनाउनुपर्‍यो भनेर ठाउँ-ठाउँमा जुलुस भइरहेको सुनेँ । आफ्नो विचार र धारणाअनुसार विचार उठाउने, आवाज उठाउने अधिकार सबैको छ’, उनले अगाडि भने, ‘संविधानमा राजनीतिक व्यवस्थामा राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको छैन । भ्रष्टाचार भईरहेको समाचार छन्, असन्तुष्टि छन् । त्यसको परिणाम पनि यो अहिलेको विरोध तथा प्रदर्शन भएको हो ।’ गणतन्त्र स्थापना भएपछि शुरुआती समयमा छिटफुट राजतन्त्रका नारा लागेपनि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछिको संविधान लागू भएपछि राजतन्त्रवादीहरू सडकमै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिएनन् । तर, अहिले भने दैनिक रूपमा देशका विभिन्न शहरमा जम्मा भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै उनीहरूले संविधान च्यातेर फाल्नेजस्ता चेतावनीसहितको अभिव्यक्तिसमेत दिईरहेका छन् ।